Tsiambaratelo sy toro-hevitra amin'ny fikarohana Google
Posted by Tranquillus | Sep 7, 2021 | Ao amin'ny tranonkala
Cette fiofanana maimaimpoana dia natao hampisehoana aminao fa ny motera fikarohana google tsy voafetra amin'ny bara fitadiavana tsotra. Hianatra ianao mahafehy ny masontsivana rehetra amin'ny fikarohana Google handatsaka mandamina sy manadio ny valiny mba hananana fidirana amin'ny fampahalalana kalitao.
Amin'ny fandaharan'ity fiofanana maimaimpoana la fikarohana google
Ohatra, hianaranao ny fomba:
Mitadiava rakitra PDF, DOC, XLS fa tsy pejin-tranonkala, Manana fidirana amin'ny valiny voatanisa amin'ny daty manokana, Ferana ny fampisehoana valiny amin'ny fiteny manokana, Mitadiava anaran'olona na toerana aorian'ny sary, Ampiasao ny SafeSearch endri-javatra hiarovana ny mpampiasa amin'ny atiny tsy mendrika. … Ary zavatra maro hafa!
Un MCQ Mazava ho azy fa hamela anao hanamarina ny fahalalanao vaovao.
Fahitana tsara an'ireo Torohevitra Google for a fikarohana mahomby.
Tsiambaratelo sy toro-hevitra amin'ny fikarohana Google 15 Oktobra 2021Tranquillus
Tohizo ny famakiana ilay lahatsoratra eo amin'ny tranonkala voalohany →
HAMAKY Fihetsika mamono tena: fantaro sy sorohina
Teo alohaModule "Mianatra mianatra": mijoro ho vavolom-belona ireo olona nianaranay
manarakaFiaraha-miasa sy firaisankina: atsangana eo amin'ny sehatry ny Vondrona Eoropeana ny cybersecurity
Ny tsy fahatomombanana, ny tsy fahatomombanana, ny tsy fahampiana: inona ny fahasamihafana?
Manomboka amin'ny Subletting amin'ny Airbnb
Manan-jo handinika ny asan'ny mpiasa ve aho mandritra ny tafa sy dinika ataon'ny mpiasa?
Ny fototry ny fitantanana tetikasa: fampidirana